Kooxo Waaweyn Oo Baacsanayaan Weeraryahanka Xulka France Iyo Barcelona Osmane Dambele.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKooxo waaweyn oo baacsanayaan weeraryahanka xulka France iyo barcelona Osmane Dambele.
April 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lala xiriirinayaa ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Barcelona Ousmane Dembele, kaasoo u bixi kara bilow cusub xagaagan Mundo Deportivo ayaa ku waramaysa in 23-jirkan ay tahay inuu go’aansado inuu doonayo inuu sii joogo ama uu guuro daaqa cusub ee xagaagan.
Wargeysku wuxuu ku andacoonayaa in kooxaha reer Yurub ay isha ku hayaan xaaladda xidiga caalamiga ah ee Faransiiska, iyadoo Juventus lagu xusay mid ka mid ah kuwa suurtagalka ah.
Warbixinta ayaa waxaa ka mid ah xiisaha ay u qabaan Manchester United, Paris Saint-Germain iyo Liverpool, iyadoo Blaugrana ay ka shaqeyneyso inay ka dhaadhiciso xiddigii hore ee kooxda Borussia Dortmund inuu cusbooneysiisto heshiiskiisa.
Qandaraaska Dembele wuxuu dhacayaa bisha Juun 2022 waxaana wargeyska kubada cagta Espana ay soo warinaysaa in kooxda Barca ay doonayaan inay lacag caddaan ah ku helaan horaantii xagaagan, si looga fogaado in ninka reer France uu si bilaash ah uga tago sanadka soo socda.